Best iPhone File Nyefee gaa na nyefee faịlụ na-/ si iPhone
> Resource> iPhone> Best Desktọpụ iPhone File Nyefee maka Windows / Mac
"Ọ bụ na ihe ọ bụla ọkachamara iPhone faịlụ transfer ngwá ọrụ? ITunes dị mma, ma ọ na-apụghị nyefee music, vidio, na foto site na iPhone ka iTunes. Dị m nnọọ mkpa a ngwá ọrụ na ọrụ dị ka iTunes ka m nyefee faịlụ site na iPhone na kọmputa ma ọ bụ iTunes. bụla aro kpọrọ ihe. N'ihi! "
Ọ bụrụ na ị na-iPhone fancier, ọ bụ nnọọ mkpa maka gị nwere ihe dị iPhone faịlụ transfer ngwa. Na iPhone faịlụ transfer, ị ga-nyefee faịlụ n'etiti iPhone na kọmputa ọzọ mfe ebe ọ bụ na iTunes apụghị nyefee faịlụ site na iPhone na kọmputa. Ọ bụrụ na ị bụghị n'aka na nke iPhone faịlụ transfer iji, ga-amasị m na-atụ aro ị na-agbalị Wondershare TunesGo Ochie. Ọ na-mere maka Apple iOS ngwaọrụ ọrụ nyefee faịlụ. Na ọ na-eme ihe iTunes nwere ike na ike.
Get ikpe mbipute nke TunesGo Ochie nyefee iPhone faịlụ!
Wondershare TunesGo Ochie ewepụtarala Windows version na Mac version. Ma ha dị ugbu a. Ọ bụ ezie na atụmatụ na Windows version bụ ubé dị iche iche ndị a na Mac version, ha abụọ magburu onwe na-ebufe iPhone faịlụ.
iPhone File Nyefee Software - Wondershare TunesGo Ochie Key Akụkụ:
Nyefee Music na vidiyo site na kọmputa na-iPhone, gụnyere songs na-na iPhone kedi usoro. N'oge na-ebufe usoro, a iPhone faịlụ transfer software ga-echetara gị mbịne iPhone kedi faịlụ ka iPhone enyi na enyi formats.
Share music na otu kọmputa na otutu iPhones. N'adịghị ka iTunes na ọ bụ nanị na-ahapụ gị nyefee music gị iPhone, mgbe na-enyefe faịlụ ndị ọzọ iPhones, ọ ga-akwụsị faịlụ. iPhone faịlụ transfer ngwa na-ahapụ gị ịkọrọ music site na otu kọmputa na ndị ọzọ iPhones, iPads, na ọbụna iPods.
Nyefee iPhone music ka iTunes Library on na kọmputa na-eme ka gị na iTunes Library a zuru ezu otu. Nke a na atụmatụ bụ karịsịa bara uru mgbe ụfọdụ songs ị jidere maka iPhone-adịghị na iTunes Library ma ọ bụ i furu efu gị mbụ iTunes Library ma na-achọ ka e wughachi ya.
Nyefee họrọ songs, vidio, na photos na kọmputa. Dị ka ihe iPhone faịlụ transfer, ọ ga-enyere gị aka nyefee media faịlụ site na iPhone na kọmputa maka nkwado ndabere na mpaghara ma ọ bụ n'ihu ojiji. TunesGo Ochie dị otú ahụ a ụdị ngwá ọrụ. Họrọ songs, vidio, na photos nwere ike zigara kọmputa na ogbe.
Dị ka m na e kwuru n'elu na Windows version bụ a ubé dị iche iche si Mac version. E wezụga hotara na mbụ atụmatụ, Wondershare TunesGo Ochie (Windows) na-ahapụ gị nyefee listi ọkpụkpọ site na iPhone ka iTunes na kọmputa, playlist si iTunes ka iPhone dị ka mma. Ọzọkwa, Windows version na-akwado ebupụ ozi ederede, MMS, iMessages na Mgbakwụnye, na kọntaktị. Ọ bụ ezie na ugbu a Wondershare TunesGo Ochie (Mac) nanị na-akwado music, video, na foto transfer, ọ na-ahapụ gị jikwaa music, video, na foto dị ka mma. Chọta ihe magburu onwe atụmatụ site onwe gị.
Gbalịa ndị ọkachamara iPhone faịlụ transfer - TunesGo Ochie ugbu a!